Nirefodrefotra ny basy tao Toamasina: miaramila serzà ny roa tamin’ireo jiolahy lavon’ny polisin’ny Fip | NewsMada
Par Taratra sur 03/07/2020
Nanakoako ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy tao amin’ny fokontany Mangarano ka hatrany Barikadimy, Toamasina, ny alarobia alina teo. Fantatra fa miaramila serzà ny roa tamin’ireo jiolahy telo indray maty voatifitry ny polisin’ny Fip…
Jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nifanehatra tamin’ny polisin’ny Fip notarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules, tamin’io fotoana io. Henjana ny fifandonana ka tsy naharesy tosika ny polisy ireo jiolahy. Vokany, lavon’ny balan’ny polisy ny jiolay telo raha azo sambo-belona ny telo hafa. Jiolahy iray antsoina hoe Gidor kosa, tafaporitsaka miaraka amin’ny basy mahery vaika. Fantatra fa miaramila Serzà teo aloha ny roa tamin’ireo matin’ny polisy ireo : i Telomaro sy Erneste. “Anisan’ny nandray anjara tamin’ny fakana an-keriny zanaka mpandraharaha roa samihafa tao Toamasina, ny taona 2012 sy 2014 izy roa lahy ireo ka izay no nahavoaroaka azy ireo. Isan’ireo jiolahy mpitarika ny bandes de 15 koa” hoy ny kaomandin’ny Fip. Nohamafisiny fa nahazo loharanom-baovao momba azy ireo ny polisy ka nametraka ny vela-pandrika, tsy lavitra ny toerana hotafihina. Tsikaritra tao amina tokantrano iray ny ireo jiolahy nanomana ny fanafihana mpandraharaha iray. Teo am-pivoahana ny trano nivoriana no nahatazana ireto polisy ry zalahy ka nandositra. Raikitra ny fifanenjehana. Teny Barikadimy vao lavo ny telo raha tafatsoaka i Gidor. Tratra kosa ireo telo lahy hafa.
Basina mpandraharaha no nampiasain’ireo mpanafika…
Fantatra fa basin’ny mpandraharaha iray ao an-toerana ihany ilay basy lava nampiasain’ireo mpanafika. Ilay mpandraharaha manome basy ny mpiambina azy ka ilay mpiambina indray no mampanofa amin’ireo jiolahy, tsy fantatry ny tompony akory. Entina anaty gony misy saribao ireo fitaovam-piadiana ka hapetraka tsy lavitra ny toerana hotafihina. Toy ireny hoe mpivarotra saribao mitety trano ireny ry zalahy. Ny sasany kosa efa manara-maso ny manodidina. Nambaran’i Kamisy Louis sy Mahefa Florien ary Tata Florant fa mizara ny andraikitra ka ireo telo lahy maty no mpitifitra sy mihazona ny basy noho izy ireo efa za-draharaha tao amin’ny tafika. I Kamisy kosa teknisianina mpanamboatra sy mpikarakara basy ary ireo roa lahy mpamaky trano amin’ny alalan’ny “pince”. I Gidor, mpibata entana sy mpanatsatoka antsy. Maro ny fanafihana efa nataon’izy ireo. Isan’izany namonoan’izy ireo ka nahafaty an’ i Darkhaom Ibrahim, rahalahin’ny depioten’Ambanja ny alahady hifoha alatsinainy teo tao an-tranony.